Moments leh saaxiibo 30
Miyuu suurtagal yahay in uu horumariyo noocyada cusub ee khudradda, miro ama dhirta, gebi ahaanba kala duwan oo ka duwan noocyada kale ee la yaqaan? Haddii ay sidaas tahay, sidee loo sameeyaa?
Waa macquul. Mid ka mid ah oo ku soo baxay safkaas mid aad u la yaab leh oo aad loo yaqaanana waa Luther Burbank ee Santa Rosa, California. Mr. Burbank wali, sida aan ognahay, wuxuu soo saaray gebi ahaanba noocyo kala duwan iyo noocyo cusub, laakiin ma jiraan wax ka horjoogsan kara inuu sidaas sameeyo haddii uu sii wado shaqadiisa. Ilaa waqtigan xaadirka ah, ilaa iyo inta aan ka warqabno, dadaalkiisa waxaa loo jihayn lahaa inuu ka gudbo noocyo gaar ah oo miraha iyo dhir ah, oo uusan soo saarin nooc gebi ahaanba ka duwan, laakiin mid leh astaamaha labada ama mid ka mid ah ama noocyo badan oo loo adeegsado horumarinta kobaca cusub. Xisaabaad fara badan ayaa laga soo saaray shaqada Mr. Burbank, in kasta oo ay u badan tahay in uusan u sheegin wax kasta oo uu yaqaan iyo wuxuu sameeyo oo dhan, si loo gaaro guusha uu isagu leeyahay. Wuxuu u adeegay nin aan lagamamalayn karin: wuxuu qaatay waxoogaa horumar ah oo ilaa hada aan la garanayn oo diidmo ah kuna abuuray dhir waxtar leh, cunno caafimaad leh ama ubax qurux badan.
Waa suurtagal in la horumariyo khudaar kasta, geedo, miro, ama ubax, oo maanka uu kuraysan karo. Waxa ugu horreeya ee lagama maarmaanka u ah in la horumariyo noocyo cusub ayaa ah: in laraysto. Haddii maskaxdu ma uuraysan karto nooc cusub, maankaasi ma kobcin karo, in kasta oo laga yaabo inuu indha indheeyo oo uu adeegsado soo saaro noocyo cusub oo noocyo duug ah. Qofkii raba inuu abuuro nooc cusub waa inuu si fiican uga fikiraa asalkiisa noocyada uu yeelan karo ka dibna waa inuu si taxaddar leh oo kalsooni leh uga dhex muuqdaa. Haddii uu leeyahay kalsooni oo maskaxdiisa u adeegsan doona si firfircoon oo uusan u oggolaan doonin fikirkiisa inuu ku mashquulo noocyo kale isla markaana uusan ku mashquulayn nacasnimo, laakiin uu ka fikiri doono kuna qancin doono noocyada uu yeelan doono, markaa, waqtigaas, wuu uuraysan doonaa fikirka kaas oo tusi doona nooca uu jecel yahay. Tani waa caddeynta koowaad ee guushiisa, laakiin kuma filna. Waa inuu kusii wadaa faafinta fikirka uu kuraystay oo uu si samir leh uga fikiraa fikirkaas isaga oo aan dhinac uga dhicin. Intuu sii fikirayo, fikirka ayaa sii caddaan doona oo habka loo soo qaadi karo noocyada cusub ee adduunka ayaa loo caddayn doonaa. Tan kale, waa inuu isu diyaariyaa inuu la shaqeeyo noocyadaas ugu dhow midka uu maanka ku hayo; inaad ku dhex dareentid; In la ogaado dhaqdhaqaaqa kaladuwan iyo in la ixtiraamo oo la muujiyo dheecaanka geedka ku socda marinnada xididdada iyo xididdada, in la dareemo waxa uu jecel yahay iyo in la siinayo, in laga gudbo dhirta uu doortey ka dibna in laga fikiro noocyadiisa Isgoysyada, si aad u dareento inuu ka soo baxay labada nooc ee uu doortay, iyo inaad siiso qaab jireed. Ma aha inuu sameeyo, mana sii dayn doono, haddii uu ilaa hadda socdo, niyad jabo haddii uusan mar uun u arkin noocyadiisa cusub sida wax soo saarka. Waa inuu isku dayaa mar labaad iskuna dayaa inuu sii wado iskudayaga wuxuu waqti ku farxi doonaa inuu arko noocyada cusub ee soo galaya, sida xaqiiqada ah way sameyn doonaan hadii uu qeybtiisa sameeyo.
Qofka soo saari kara nooc cusub oo u baahan in la ogaado wax yar oo botany ah marka ugu horreysa, laakiin waa inuu iskiisa u gartaa dhammaan waxa uu ka baran karo shaqadan. Waxyaabaha koraya oo dhan waxay leeyihiin dareen waana ninku waa inuu dareemaa iyaga lana jeclaadaa, haddii uu yaqaannaan jidkooda. Haddii uu heli lahaa waxa ugu wanaagsan ee ku dhex jira, waa inuu siiyaa waxa ugu fiican ee uu haysto. Xeerkani wuxuu si wanaagsan u marayaa boqortooyooyinkoo dhan.